Cannabis Guri Illinois - Sida loogu sharciyeeyo xashiishadda cannabis gudaha Illinois
Koriinka Cannabis ee Guryaha ku yaal Illinois
Kobcinta Guryaha Illinois ee Deganeyaasha Caafimaadka Marijuana
Immisa geedo ayaad ku beeri kartaa Illinois?
Korodhka cannabis ee ku taal Illinois ayaa heli kara bukaanka xashiishadda cannabis ee ku nool deegaankooda koowaad - oo xaddidan shan5) geedaha xashiishadda inka badan shan (5) inji dherer - qoyskiiba & qofkiiba.
Dhageyso ama daawo dib u eegista qodobka 10aad Isticmaalka Shaqsiyeed ee Xashiishadda (koritaanka guriga). Guji xiriiriyaha sharciga 610 bog oo buuxa oo ay ansixiyaan Sharci dejinta Illinois
Qoraalka biilka ee ku saabsan kororka guryaha loogu talagalay dadka deggan marijuana caafimaad ee Illinois ee loogu talagalay deggenahooda aasaasiga ah ayaa ka hooseeya, oo ay weheliso transcript fiidiyowga & qodobka sharciga laftiisa.
LA XIDHIIDH BADAN: Helitaanka Shaqada Warshadaha Xashiishka
LA XIDHIIDH BADAN: GUDBINTA CARRUURTA SHARCIGA ONLINE
Xashiishadda Guryaha Soo Baxday Way Fududaan Kartaa
Xaqiiqdii, iyada oo sharciyeynta dhowaan ee soo-saarka marijuana ee guriga ku kordheysa ujeeddooyin daaweyn loogu talagalay gobolka Illinois, beeraleyda ka badan intii hore waligeed waxay u jeedsadaan internetka si ay talo uga helaan.
Ogaanshaha sida loo beero xashiishadda gobolka Illinois waxay ku lug leedahay ka warqabka shuruudaha gaarka ah ee gobolka - iyo helidda dariiqooyin aad uga shaqeyso waxaad haysato.
Buuxi Codsi oo Hel Kaadhka Xashiishka ee Caafimaadka
Nasiib darrose, qofna qof uun kuma noqon karo cannabis u gaar ah Illinois dhexdeeda. Waxaad ubaahantahay inaad ku talagashid isticmaalka xashiishadda cannabis ujeeddooyin daaweyn, iyo waxaad u baahan tahay inaad dalbato liisanka xashiishadda cannabis - ama kaarka. Si aad u hesho ruqsad, waxaad u baahan tahay inaad dalbato - oo loo isticmaalay illaa toban bilood illaa sannad in lagu baaraandego sannadka 2015. Si kastaba ha noqotee, marka la gaaro 2020, waxaad ka heli kartaa kaarkaaga xashiishadda caafimaad ee Illinois maalin ama wax ka yar.
Dhamaan soosaarayaasha mustaqbalkaba ma helayaan liisamadooda, midkoodna. Si kastaba ha noqotee, waa tallaabada ugu horreysa (waana lagama maarmaan!).
Faa'iidooyinka Kobcinta Gudaha
Cimilada Illinois waa sida in xashiishadda ka soo baxda bannaanka si weyn looguma taliyo. Sidaa darteed, waxaad noqon doontaa kuwa ugu guulaha badan sii kordhaya xashiishadda cannabis gudaha.
Faa'iidooyin badan ayaa jira marka sidaas la sameeyo. Kaliya ma awoodi doontid inaad xakameyso heerkulkaaga, hawada, iftiinka, iyo qoyaanka, laakiin waxaad sidoo kale siin doontaa dhir aad ku nooshahay bey'ad deggan oo deggan. Tani waxay kor u qaadi kartaa wax soo saarkaaga muddada dheer.
Bixiso Shuruudaha Deegaankaaga
Haddii aad horey u beero, waa laga yaabaa inaad ogaato sida dhirta qaar ay u qurxin karto! Xashiishku waxba kama duwana. Waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso nalka marxalad kasta oo koritaan ah oo aad bixiso ugu yaraan 40 ilaa 60% qoyaan. Waxaad ubaahan doontaa heerkul 70 ilaa 85 digrii ah (marka nalalka la shido) iyo 58 illaa 70 digrii (marka nalalku dansan yihiin).
Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad dayactirto tayada hawada ugu fiican leh hawo-mareenka, gegada diyaaradaha, iyo miiraha, waxaadna u baahan doontaa inaad ka fogaato wax-ku-bixinta sidoo kale.
Haddii aad nasiib u leedahay inaad hesho rukhsad si aad ugu kobciso cannabis gudaha Illinois, waxaad u maleyneysaa inaad wax u dhimayso si aad u bilowdo. Ha u ogolaan naftaada in lagu qaado.
Hubso inaad haysato qalab habboon iyo aqoon-kororsi intaadan bilaabin. Waxaa jira dhammaan noocyada agab ee aad u baahan doontid inaad maal gashatid, iyo tayada ugufiican ee aad awoodi karto, ayaa sifiicnaan badan aad u heli doontaa mar dambe.
Heerka aasaasiga ah, waxaad u baahan doontaa:
Qol koraan ama sanduuq koraan
Hel Seeds Xaq ah
Marka lagu daro qalabka aan kor ku soo sheegnay, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad maal gasho abuurka saxda ah. Haddii aad mariin marijuana ujeedo caafimaad ah, waxaad ubaahantahay inaad dooratid nooc cufan oo cannabinoids ah. Haddii kale, nooca ugu wanaagsan ee xashiishadda cannabis way kala duwanaan doontaa, laakiin xulashooyinka waxaa ka mid ah sativa, indica, iyo Beelaha.
Jadwalka waqtiga ee kobaca kobciyaha
Mar alla markii aad haysatid qalabkaaga oo dhan, waxaad ubaahan doontaa inaad naftaada isbarato dhamaan tillaabooyinka ku lug leh kobcinta marijuana. Dabcan, waxaad ku bilaabi doontaa inaad abuurto abuurkaaga oo aad sugto iyaga inay ku bislaadaan, laakiin markaa waa inaad jimicsi xoogaa dulqaad ah u sameysaa sida dhirtu u dhex gasho abuurka, daaqsinka, ubax, ka dibna ugu dambeyntii - goosashada iyo soo kabashada marxaladaha.
Samir, in kasta oo, iyo in dadaalkaaga adadag uu faa'iido kuu yeelan doono. Barashada sida loogu beero xashiishadda gobolka Illinois kaliya maahan abaalmarin shaqsiyadeed iyo mid kobcineysa laakiin sidoo kale faa'iido weyn ayey kuu leedahay adiga.
Qaanuunka Koritaanka Guryaha ee Illinois waa Qodobka 10-aad ee CRTA ee Adeegsiga Shaqsiyeed
Halkan hoose ka akhriso sharciga IL: Qodobka 10-aad ee CRTA
Fiidiyowga marijuana ee Illinois ee guriga ka baxa
(Tani waa nuqul ka mid ah fiidiyaha iyo muuqaalka kore).
Oh, subax wanaagsan qof walba. Waxaan moodayay inay fikrad fiican tahay in laga dhawaajiyo makarafoonka. Laakiin halkan kaalay oo ka gudub wixii xalayto ka dhacay Springfield, Illinois. Waad aragtay, Illinois dhab ahaantii sharciyeysan marijuana. Hadda, markii aan idhaahdo sharciga marijuana ee Illinois, waxaan qiyaasayaa inaan u qalmo taas. Guurtida 'Illinois' waxay u codeeyeen una ansaxisay sharci ahaan marijuana. Sharci ahaan loo yaqaan 'marijuana' ee Illinois waxay ahayd HB1438. Dadka qaarkiina waxay weyddiinayeen,
"Maxaa HB1438 oo aan SB007 ahayn?"
Marka waxaan u marayaa inaan shaashadda la wadaago runtii, runtii dhaqso. Kadibna waad awoodi doontaa inaad aragto kuwan, biilka.
Marka haddii aad tahay qareenka xashiishadda google, taasi waa sida aad aniga ii heli kartaan. Magacaygu waa Tom Howard. Waxaan ahay… Kani waa boggeyga internetka Qareenka Wershadaha Cannabis. Hada cinwaanka Chicago kaliya ayaa ku yaal halkaas. Arrin ayaan ka qabaa… Google ganacsigeyga. Laakiin waad ogtahay sida taasi tahay.
Marka si kastaba, kani waa nuqul ka mid ah biilka. Haddiise aan gacanta ku dhufto mar labaad, waxaad arki doontaa inaan raadinayay deggane. Sababta aniga aan u raadinayo degane… Oo waxaan aaminsanahay inay ahayd haddii aad xakamayn F ka sameysid halkaan… Iyo domainkaan, ha walwelin, waxaan ku ridi doonaa qeexitaanka fiidiyowgaan markii aan sameeyo. Waxaad awoodi doontaa inaad aragto waxa Senate-ka Illinois uu dhaafay shalay. Dadka qaarkiina waxay dhahaan, Guri ma dhisna? Dhab ahaantii taasi waa waxa aan hadda ku tusay.
Oo sidaas daraaddeed haddii aad tagto oo aad baarto SB… Maya maahan SB. Tani waa HB1438 oo ay soo gudbiyeen golaha guurtida Illinois shalay, 9-aad ee ka mid ah erayga 38-aad ee deggeneyaasha ayaa kuu horseedi doona dadka waaweyn ee Illinois isticmaala guriga. Hadana wali guri ayaa koray. Si kastaba ha noqotee, waxay soo saareen xadidanno gaar ah. Tkii ugu horreeyay wuxuu qaadanayaa kabasho qaxwaha subaxnimada. Ilaahoow. Illinois iyo gaar ahaan Peoria, Illinois runti waxay kufiican tahay qaxwaha rooti cusub. Ma hubo haddii aan aadi lahaa meel kale.
Marka koritaanka guriga ayaa jiri doona. Si kastaba ha noqotee, waxay xaqiijiyeen inay noqonayso qof, waxay ku kooban tahay qof deggan Illinois, 21 jir ama ka weyn, kaasoo ah bukaanka u qalma marka loo eego barnaamijka tijaabada ah ee tijaabada ah ee tijaabada ah tijaabada daawada Cannabis. Kuwaas waxay beeran karaan xad la'aan shan geed oo in ka badan shan inji dherer ah qoyskiiba. Iyadoo aan lahayn xarun wax soo saar ama shati xaraash. Ka dibna qaybtan, degane, waxaa loola jeedaa qof deggenaa gobolka Illinois muddo 30 maalmood ah ka hor beerinimada.
Guryaha Illinois ku koraan xashiishad
Marka dadku waxay kuu sheegaan inaysan jirin guri ku koraya sharciga 'Illinois' ee isticmaalka dadka waaweyn. Qayb ka mid ah amaahda, ma jirto guri ku soo kordha dadka aan bukaanka lahayn daaweynta marijuana. Haddii aad tahay bukaan bukaanka marijuana ee Illinois ka dib weli waad ku kortaa guriga. Waa maxay macnaha markaan dhaho… Hagaag waa wax marin habaabin yar. Waxaan idhi Illinois xashiishka sharciyeysan oo farsamo ahaan run ah. Tani waa markii ugu horreysey ee ay Illinois mar uun u codeyso sharciyeynta marijuana heerka gobolka. Kaliya waa goboladaas dabcan, marka laga reebo Nebraska, waa laba-labo. Oo sidaas Guurtidu way meel mariyeen. Laakiin taasi waa wax aan caadi ahayn maxaa yeelay biilka Guurtida waa SB007. Laakiin taasi maahan biilkii ay meel mariyeen. Halkii ay ka gudbaan HB1438. Iyo HB1438 dabcan waa biilka Guriga. Sidaas darteedna biilka Gurigu wuxuu ahaa waxa lagu soo kordhiyey… Ka dibna waxaa beddelay Cassidy ee Aqalka si uu ugu qalmo sida guriga u koraysa oo keliya bukaannadan marijuana caafimaad. Waxyaabaha kale ee aan markaas ka dib boodi doono ayaa dib ugu laabanaya shaashadda si dhakhso leh. Kaliya tegi maayo oo kaliya… Markaa u tag, mar kale waa sax, bogga 40 ee Illinois Med…
Muddada 2020 waxay ku soo baxdaa 32 jeer Sharciga Isticmaalka Dadka Waaweeyn ee Illinois
Hagaag maahan marijuana caafimaad, waa qof qaangaar ah hada isticmaal marijuana. Taasi waa meesha aad ka heli karto inuu gurigaagu ku koro haddii aad tahay bukaan caafimaad. Laakiin aan ka hadalno sannadka 2020-ka. Taasi waa inay ahaato… 2020. Waa maxay sababta aan ereygeygu u soo jawaabin? Hagaag, taasi waa jawaab. Xakamee hel… Waa hagaag hadda way shaqeyneysaa. Arimaha farsamada yar yar had iyo jeer way dhacaan. Marka aynu eegno ereyga 2020. Ereyga 2020-na wuxuu ka muuqan doonaa 32 jeer sharcigaan. Maxaan u raadineynaa ereyga 2020? Sababtoo ah haddii tani dhaafto waxaan galaynaa waqti xiiso badan oo taariikhda 'taariikhda' ah halkaas oo codsiyo fara badani ay yihiin noocyo gaar ah oo shatiyo gaar ah oo isticmaalka maandooriyaha dadka waaweyn ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa khadka tooska ah sannadka 2020. Ugu yaraan waa wakhtigaas codsiyadaas . Taariikhda ugu horeysa ee xarafka cas wuxuu noqon doonaa May 2020. Laakiin runtii aan ku bilowno taariikhda xarafka koowaad ee ugu horreysa, Janaayo 1 ee 2020. Janaayo 1-deeda 2020 waxay noqon doontaa taariikhda aad runtii tegi karto oo aad u iibsan karto dadka waaweyn isticmaalka marijuana. Waxay kaloo noqon kartaa taarikhda taarikhdu tahay dhaqan galkeeda.
Maanta shalay waxaan joognay showga anigoo ka hadlaya wararka sharciyeynta daroogada cannabis. Rukunso hada si aad noogu soo biirto. Arbaco walba saacadda 2-da galabnimo waxaan uga dul qaadnaa wararka sharci daweynta cannabis ee usbuuca. Ka dib markaa waxay sida caadiga ah leeyihiin qaar ka mid ah wararka sharciyeynta cannabis aad u weyn isla markaaba aan ka baxno baahintaas. Vis-a-vis Golaha Senate-ka ee Illinois ee gudbinaya marijuana. Waan ka xumahay. Ma haysto qof aan ku tuuro taas oo waqtiga buuxin karta. Markaa Janaayo 1deeda 2020 waxaad mari doontaa marijuana sharci ah waana inay sharci tahay inaad iibsato. Laakiin sharci ma ahan in laga iibsado qof walba. Taabadalkeed waxay noqon doontaa oo keliya sharci in laga iibsado ansixinta hore ee dadka waaweyn ee adeegsanaya ururada kala-baxa. Marka waa aniga. Markaa kuwan waxay aasaas ahaan u noqon doonaan shirkadaha marijuanaatka caafimaadka ay aabe u noqon doonaan. Kuwaasina waxay noqon doonaan kuwa bilaabi kara iibinta xashiishadda iibiyaasha maalinta koowaad ee 2020.
Hadda dabcan, wakhtigaas 2020 wuxuu u muuqdaa 32 jeer. Anigana ma fiirinaayo… Waa halkaas. Halkan aan aadno, halkaan u aadno Taasi waa waxa aan raadinayay. Xilligaan oo ah Maajo 1, 2020, waqtiga kama dambaysta ah, oo la siinayo laysanka shuruudda leh ee sharuudaha qaangaarka ah ee shati ururinta ah kahor Janawari 1, 2021. Waaxyada, waaxda dabcan macnaheedu waa waaxda beeraha, waxay soo saari doontaa illaa 75 rukhsad qaangaar oo adeegsan kara kahor Maajo 1, 2020 Kadibna waxay sameyn doonaan dalabka isticmaalka qaangaarka, haa, dalabka ma jiri doono ilaa Oktoobar 1, 2019. Laga yaabee inaad niman tihiin, waxaad u badan tahay inaad tan ka ogaateen aniga. Waxaan matalaa shirkado badan oo hemp ah. Codsiga hemp-na lama shaacin illaa iyo 30-ka Abriil ee sannadkan. Taasi waa sax, bil ka hor ilaa maanta. Isla markaana waqtigaas taleefankeygu wuu qarxay waxaanan caawiyay dad aad u tiro badan.
Laakiin hadda waxaan u soconnaa wax aad la mid ah. Halkaasoo dad badani ay rabaan mid ka mid ah 75ka shati. Iyaguna waxay rabaan inay dalbadaan mid ka mid ah liisamadaas kahor 1-da May 2020. Laakiin tani uma noqon doonto wax fudud sida shati hemp ah oo aad u isticmaaleya saaxibtinimo aadna u wanaagsan. Jeff Cox iyo waaxda dhirta caafimaad ee hoos taga Waaxda Beeraha ee Illinois waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan dalabkaas. Laakiin waxaad haysataa daaqad dhaadheer. Waa maxay sababta ay u noqonayso codsiyada aan la heli doonin illaa Oktoobar 1-aad oo aan la aqbali doonin wixii ka dambeeya Janaayo 20? Ka dib markaa ma bixin doontid codsiyadan illaa 1-da Maajo. Markaa ka fikir taas. Oktoobar 1, Jan 1, Meey 1… Telefoon laga soo diro South Carolina. Ma noqon karaa macmiilkii ugu horreeyay ee maanta i soo waco.
Markaa waxaad haysataa Janaayo 1-deeda 2021 waa goorta ay codsiyadaadu ku eg yihiin. Maheli kartid dalabka illaa Oktoobar 1-deeda ee 2019. Mana jiri doonto 75 jir. Waxaa jiri doona in kabadan 75. Waxay isku dayayaan inay cagahooda kahelaan albaabkaas. Laakiin markaa ma sheegi doonaan cidda ku guuleysata shan bilood. Kuwaani waa noocyada dalabyada ee ay tahay in la dhaliyo. Codsiguna aad buu u weynaan doonaa maxaa yeelay waa inaad isu keentaa kooxdan si aad iskaga hubiso dhammaan santuuqyada ku soo bixi doona codsiyadan. Markaa waad fahantay, haddii aad iskudayeyso inaad gaadho ilaa 200 oo waxaa laga yaabaa inay jiraan 212 dhibco taas. Ma sameyn doonno fiidiyowga hadda sababtoo ah waxaan shir ku leeyahay qiyaastii 45 oo ay tahay inaan tago.
Waana sidaa darteed wax yar baan ka wada hadli karnaa waqtiga oo gurigaagu koray weli wuxuu u jiraa bukaanka marijuana caafimaad. Aynu dib ugu laabano qaybta shaashadda oo waxaad arki doontaa qaar ka mid ah taariikhaha kale ee xiisaha leh ee casaanka. Marka tan, midkan, si loo hubiyo kalasoosaarka joqoraafiyeed ee [cosboon 00:08:58] dadka isticmaala liisanka liisanka ee ururka. Lambarka soosocda ee liisanka waxaa lagu siin doonaa gobol kasta oo BLS ah sida blah, calah, calal. Marka sidaa darteedna waxaan runtii ku noolahay Peoria, waxaan u soconaa seddex. Taasi waa freakin qabow. Aagga St. Louis wuxuu helayaa afar, dabcan Chicago waxay helaysaa 47. Tanina waa wax la hubo. Waxaan ula jeedaa waxaa jira waxbadan oo Illinois ah… Waxaan ula jeedaa kaliya Rock Island ayaa ah mid heleysa oohinta qeylada badan. Laakiin Peoria ayaa heshay seddex. Haa, habka loo sameeyo taas [Jehan 00:09:24]. Mid fiican.
Iyo sidaas kuwa kale, waxaa jira beerista Janaayo 21-keeda. Aynu aragno, waaxda sideedaad… Oh Oh xitaa ma hubo waxa uu yahay. Barnaamijku wuxuu ruqsad u siinayaa barnaamijka tijaabinta xirfadaha cannabis kulleejada bulshada. Oh taasi runtii waa qabow. Taasi waa wax aanan xitaa ogeyn… xitaa ma aanan ogeyn inay halkaas ku jirtay. Qodobka 25aad, Kulliyada Xashiishka, Barnaamijka tijaabinta Xannaanada Cannabis. Taasi waa sax Illinois, tag kulliyadda bulshada iyo tan ugu weyn ee xashiishka. Fuck xitaa waan qori karaa. Waxa ku saabsan taasi waa kuwan biilal kala duwan. Hindise-sharciyeedka ahaa SB007 ee Guurtidu meel marinin, taa beddelkeeda wuxuu Guurtidu meel mariyey HB1438 sida lagu soo bandhigay aqalka. Biilku waa 610 bog dherer ah. Markaa… Waxaa jira barnaamij tijaabo xirfadeed xashiishad cannabis oo bulshada dhexdeeda ah oo halkaas ka jira oo aan cidina ka hadlaynin. Taasi kama yaabin intaas oo dhan. Laakiin waxay u egtahay inay ku soo socoto Illinois, oo ah xashiishadda ugu weyn. Waa macaan macaan.
Waan ka xumahay taas. Waa inaan iska saxeexaa dhammaan 2020-yada. Waxaa jira 32 ka mid ah falkan. Hadana waxaan dib ugu soo dhaweynayaa taas oo waxaan si dhakhso leh ugala hadli doonnaa waxa laga yaabo inay tahay qodobka ugu xiisaha badan ee sharci dejinta dadka waaweyni ee sharci dejintu ay shalay ansixiyeen. Waxaan rajeyneynaa inaan kawada hadli doono waxa ku haboon kiis. Mana garanayo inay taasi dhici doonto. Si dhakhso ah ayaan uga wada hadli doonnaa. Laakiin 40 farshaxanimo ayaa kordhaya liisanka 1-da Luulyo 2020. Markaa ma iibin karaan illaa wixii ka dambeeya Diseembar 21-deeda 2021. Kadibna Diseembar 21-ka 2021 waxay yihiin [inaudible 00:11:19] illaa 60 kale oo shati farshaxanimo ah. Marka waxaa jiri doona 100 ugu yaraan, sidoo kale 100 hadda, shatiyada koritaanka farshaxanka soo socda. Ka dibna waxaa jira xayiraad ku saabsan shatiyadaha sii kordhaya ee farshaxanimada. Oo waxaan aadayaa… Ka dib waa kan mid kale. Iyo in aan waqti shati farsamayaqaan ka badan 150 iyo xayiraadyo kale. Hadana waa kuwan waxyaabaha dalabka ah ee aan sidoo kale ka gudbi doonno.
Beeraleyda farshaxanku waa kuwa xiise leh dareenka ah in taasi ay noqoneyso jidkii dadku dib ugu soo laaban karaan xashiishadda cannabis. Waxaana jira xaddidno ku saabsan cidda iyo waxa lahaan kara dhammaantood. Waxaa jiraya jihooyin badan oo looguna talo galay fidinta, si farshaxanku u kobco. Ka dib marka ay kuwaasi ciyaaraan, Illinois ayaa joogsada… Sababtoo ah sida ok, waad kortaa, waad socodsiisaa, waad faafin doontaa. Xaq? Ayaa wadida dheriga? Taasi waxay noqon doontaa laysan cusub oo soo socda, gaadiid. Marka kadib, mid ka mid ah taariikhahaan, mid ka mid ah taariikhaha xarafkan casaanka ah ee halkaa ku jira, waxaad awoodi doontaa inaad hesho nooc kale oo shati. Xarunta xanaanada iyo xarunta wax soo saarka iyo kumbuyuutarradu ma qaadi karaan xashiishadda. Waxay ku qasban yihiin inay u soo wareejiyaan gaadiid u sharciyeysnaa xashiishadda cannabis. Marka anigu waxan qirayaa sababta oo ah xasaasiyadda ayaa i dileysa.
Sida laga yaabo inaadan ka warqabin, Illinois ayaa la silicaya, sidoo kale dhibaatada waddanka oo dhan waxaa ku dhacay waxa noqon kara mid ka mid ah daadadkii ugu xumaa tan iyo Daadkii Weynaa ee la mid ah 1927. Ama wax alla wixii ay ku sheegeen warka. Galleydu dhab ahaantii kuma jiraan beeraha. Beeraha ayaa gundhig u ah xashiish. Waxaad u badnaan lahayd bariis. Taasi waa… Waxaan ku leennahay heerar badeedka bariiska biyaha ah ee ka jira Illinois. Oo waxaan u maleynayaa in dhab ahaantii dib loo dhigay dalagga hemp in yar xoogaa. Ayaa danaynaya Shalay, golaha Senate-ka Illinois waxay u codeeyeen sharciyeynta marijuana. Waxaan rajeyneynaa waxa hadda dhacaya, maxaa yeelay Golaha Sharci dejinta ee Illinois ayaa dib loo dhigay Jimcaha, berri, May 31-keeda. Maanta Golaha ayaa meel mari doona waa biil gaar ah, HB1438. Berrito JB Pritzker ayaa u saxeexi doona sharci. Laakiin laga yaabee in taasi aad dhakhso u tahay. Waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin waqti ay ku ogaadaan, uga faa’iidaystaan ​​cinwaannada noocaan ah. Taasna waxay noqon doontaa wax lala yaabo bil gudaheed inuu ka soo baxo usbuuca ugu horreeya ee May kadibna qabashada shir-saxaafadeedkan. Halkaas oo uu ka soo saaray sagaalkaas bog ee aan ku abuuray bog ku yaal. Oo kanuna wuxuu noqon doonaa bog sidoo kale. Laakiin kani wuxuu noqon doonaa bog burburiyey si aadna diiradda loogu saaray kobcinta guriga ee isticmaalka dadka waaweyn ee marijuana ee Illinois. Ka dibna arrimo kale oo is-afgarad ah.
Dhammaan lixdaas bog ee ah 610 bog, haddii ay gudbaan, waxay ka dhigi doonaan waxyaabaha aan ku abuurayo shaqo waxoogaa sahlan. Laakiin sidoo kale xoogaa cabsi leh. Sababtoo ah sidaan u sameeyo sheygan markaa waxaad ku qiimeysaa internetka oo markaa dadku ayaa kuu soo wacaya. Kadibna dadku waxay kaa doonayaan inaad ka caawiso iyaga isku duubitaanka codsiyadan. Dabcan dhab ahaantiina waxaad saaran tahay dushaas. Hadana waa wax badan ... Way socotaa ... Waxaa laga yaabaa inaan caroodo sanad gudihii. Waan arki doonnaa. Waxaan rajeynayaa inaan seexan karo. Markaa berri, iyagoo rajeynaya inay meel mariyaan biilkooda ka dibna JB Pritzker wuxuu leeyahay shir-jaraa'id oo aad u wanaagsan. Qof walbaa wuxuu dhahay waxa layaabka leh ee ay u noqon doonaan gobolka Illinois. Oo waxay noqon doontaa. Ka dib markaa ayaan hore ugu soconnaa. Si kastaba ha noqotee, garan maayo inay taasi dhici doonto maanta. La yaab iguma noqon doonto. Taasi runtii waa wax la yaab leh haddii Illinois ay noqoto dowladdii ugu horreysay ee sharci dejineysa marijuana. Iyo in sidaas la yeelo waxay u baahan yihiin labadaba, maahan Madaxweynaha, gudoomiyaha iyo labada aqal ee Golaha Sharci dejinta. Kadibna wali waa ay baahan yihiin… Aniguna waan awoodaa…
Si tan loo dhammeeyo waxaan la wadaagi doonaa dhamaadka biilka adeegsiga qaan gaarka ee Illinois. Waxay ku dhamaanaysaa qodobka 999. Waxaan rumeysanahay in tan uu qoray [Herman Cane 00:15:21]. Sidaad arki karto waxay dhererkeedu yahay 610 bog. Xawaareyn ama dib u dhac ma leh. Oh gosh. Haa. Sababtoo ah waxay u badan tahay inay taasi dhigayaan… Waa hagaag. Hadda qofkeyga India joogta waxbaa u baahan. Waa hagaag, waa sax oo keliya nooca ay aniga ila tahay. Waxaad heshaa xoogaa waqti ah ka dibna dadku waxay rabaan waxyaabo. Waa hagaag, Waa inaan xafiiska aado. Waxaan hayaa qof soo gala.